सुर्खेतमा कुन स्थानीय तहको जग्गाको न्यूनतम मूल्य कति ? - Arthapage
सुर्खेतमा कुन स्थानीय तहको जग्गाको न्यूनतम मूल्य कति ?
प्रकाशित मितिः ३१ श्रावण २०७७, शनिबार १६:५१ August 15, 2020
नेपालगन्ज ३१ साउन : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा जग्गाको मूल्य कति छ ? व्यवहारिक चलनचल्तीको मूल्य फरक पर्ने भएपनि जिल्लामा भने जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । नयाँ कायम न्यूनतम मूल्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मान्य हुने छ ।
सरकारले राजस्व उठाउन गर्ने मूल्यांकनका तुलनामा व्यवहारमा किनबेचको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी नै हुने गरेको छ। संघीयतापछि मुलुकमा बसोबास र चहलपहल बढेका सहरको घडेरीका जग्गाको भाउ दिनदिनै उकालो लागेको छ। राजमार्ग, बजार, अस्पताल र शैक्षिक संस्था सुलभ रहेका ठाउँमा भाउ उक्लिएको उक्लिएकै छ।
प्रदेशका राजधानीमा सबैभन्दा कम सरकारी मूल्यांकन भएको प्रदेश राजधानीमा कर्णाली प्रदेशको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रति कट्ठा ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारकी मूल्यांकन छ। तर चलनचल्तीको मूल्यमा भने यहाँ पनि कमि छैन।
हेर्नुहोस् न्यूनतम मुल्यांकन-
प्रकाशित मितिः ३१ श्रावण २०७७, शनिबार १६:५१ |
Prevगाउँ पुगे बैंक तथा वित्तीय संस्था
Nextहाट आउँदाका ती दिनहरु